2019सम्म DoFollow ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न उत्तम तरिका के हो?
जब SEO मा आउछ, कसैले धेरै भन्दा साधारण अभ्यासहरू र केहि सर्तहरू जुन वर्षका लागि काम गरिरहेको छ. निस्सन्देह, खोज ईन्जिन अनुकूलन को आधुनिक दायरा लगातार प्रगतिशील अद्यतन र संशोधित Google को प्रमुख खोज एल्गोरिथ्म को अनुकूलन को प्रयास को विकास को लागि विकसित गर्दै छ।. यद्यपि, केही चाल र प्रविधिहरू जुन हालैका वर्षहरू मार्फत दक्षता पाएको छ - म त्यसको अर्थ उनीहरूको मूल क्षमतामा कम्तीमा भविष्यको भविष्यमा राख्नको लागि उचित हुन सक्छ।. र तपाईं सही हुनुहुन्छ - 2019सम्म DoFollow ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न एक राम्रो तरिका हो. तल मैले तपाईंलाई ब्लगिङको बारे सबैलाई देखाउन जाँदै छु कि ती प्रोव्याकमा DoFollow सँग यी योग्य ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न प्रो. त्यसैले, सुरू गरौं.
यो ज्ञात सम्बन्ध निर्माण उपकरण 2019 मा DoFollow ब्याकलिङ्कहरू निर्माणको लागि उपयोगी भएको जस्तो देखिन्छ।. यहाँ तपाईंले लिङ्क इमारतको लागि यो उत्कृष्ट तरिका प्रयोग गर्न थाहा पाउनु भएको छ.
चरण 1: दायाँ फाउण्डेसन आकार
सबै भन्दा पहिले, म मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरु र मुख्य वाक्यांशहरु संग सुरू गर्न सिफारिस गर्दछु. सम्झनुहोस् - तपाईंको कुञ्जीपाटीहरूको लागि सही छनोट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले तपाईंको सामग्री अनलाइन खोजको लागि दृश्यात्मक बनाउँछ. हो, ठूलो सामग्री लेख्ने सबै भन्दा उच्च पीआर ब्याकलिङ्कहरूको साथमा राम्रो लाग्छ. तर सबै भन्दा सजिलो कुरा हुनेछैन जब सम्म वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूले तपाईको सान्दर्भिक खोजशब्द प्रश्नहरू खोज्न सक्दछन्.
चरण 2: विशिष्ट ब्लग पोष्टहरू प्रयोग गरी लिङ्क फिर्ता लिनका लागि प्रयोग गर्नुहोस्
एक पटक तपाइँसँग सही कुञ्जी शब्दहरूसँग सुरू गर्न एकपटक, म तपाईंको विशेष विषयसँग सम्बन्धित केहि विशिष्ट ब्लगहरूमा टिप्पणी गर्न जान्छु। बजार आला. त्यस तरिका, म टिप्पणी ल्युभ प्लगइन प्रयोग गरेर सिफारिस गर्दछु, एक धेरै सुविधाजनक ब्लग टिप्पणी प्रणाली जुन एसईओ र व्यावसायिक वेबमास्टर्स बीच राम्रो. र म विश्वास गर्दछु यो शानदार तरीका 2019मा पनि DoFollow ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न अझै मान्य हुनेछ. सबैले आत्म-संचालित तरिकामा लगभग काम गर्दछ, त्यसैले तपाईं यस सानो सहयोगी संग काम गर्न कुनै जटिलता हुनु पर्छ.
चरण 3: टिप्पणिहरु राख्नु वास्तविक
र यहाँ हामी एकदम नाजुक जंक्शन मा प्रवेश गर्दै छन्. मेरो मतलब तपाईलाई चेतावनी दिनुपर्छ - कुरा भनेको हो कि ब्लगरहरूले सजिलै बुझ्न सक्छन् तपाइँ केवल प्रायः टिप्पणीहरू हुन् जुन DoFollow सँग यी योग्य ब्याकलिङ्कहरू छन्।. यही कारणले तपाईंको हालका टिप्पणीहरूको शेरको अंशलाई छोटो सूचनामा पनि खरिद गर्न सक्छ. घटनाहरूको यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई रोक्न, म तपाईंलाई तपाईंका सबै टिप्पणीहरू सँधै सुझाव दिन्छु. म यहाँ मतलब छ कि तपाइँ लाइभ जान अघि तपाईसँग हरेक ब्लग टिप्पणीको लागि डबल जाँच गर्नु पर्दछ. केवल केहि ठाँउ ठाँउ मा केहि समय बिताने को लागी ध्यान राखन - लेखहरु लाई राम्रो तरिकाले पढें, र केवल उचित टिप्पणिहरु छोडें कि न केवल सिद्ध भावना न केवल तर पाठकों को वास्तविक मूल्य वितरित गर्न सक्छ.
त्यसो गर्दा, ब्याकलिङ्कहरूको लागि धेरै धेरै ब्लग टिप्पणीहरू स्पाइङ्गिङको साथ कहिल्यै अचम्म नदिनुहोस्, जब सम्म तपाई Google खोज ईन्जिनियरिङ्मा रातो झण्डा बढाउन चाहनुहुन्न।. कुनै पनि अप्राकृतिक वा स्प्यामी गतिविधिको साथ संदिग्ध खोज्नु नदिनुहोस्. अन्तिममा, नबिर्सनुहोस् त्यहाँ लेख डाइरेक्टरीहरू पठाउन वा फोरममा ब्याकलिङ्कहरू पाउने जस्ता थुप्रै अन्य तरिकाहरू छन्. लिङ्क बिल्डिङको यी सुन्दर उपयोगी तरिकाहरू उचित रूपमा आशा गर्न सकिन्छ कि उनीहरूको क्षमतालाई 2019सम्म बहुमूल्य DoFollow ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न को लागी राख्नुहोस्। Source .